कोलम्बिया को मौसम | Absolut यात्रा
कोलम्बिया को मौसम
Isabel | | कोलम्बिया
पहिलो पटक कोलम्बिया भ्रमण गर्ने यात्रुहरूलाई आश्चर्यचकित पार्ने पक्षहरू मध्ये एक हो, यो बर्षभरि यसको मौसमको समानता हो। कारण यो छ कि यो देश भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा अवस्थित छ, त्यसैले मौसमको अनुभव संसारका प्रायजसो राष्ट्रहरूमा हुने छैन र सूर्य उगने वा खस्ने समय परिवर्तन हुँदैन।
कोलम्बिया हिउँदको तापक्रमदेखि लिएर उष्णकटिबंधीय मौसमसम्म जलवायुको हिसाबले धेरै विविधता भएको देश हो। यसका दुई मुख्य सीजनहरू छन्: सुख्खा एउटा (डिसेम्बरदेखि जनवरी र जुलाईदेखि अगस्तसम्म) र एउटा भिजेको (अप्रिल देखि मे र अक्टुबरदेखि नोभेम्बरसम्म)। तर माथिको मतलब कोलम्बियाको मौसम उस्तै हो भन्ने होइन। वास्तवमा महान टोपोग्राफिक विविधताले देशलाई परिदृश्य, थर्मल फ्लोर र जैवविविधताको एक बहुलता दिन्छ।
निश्चित रूपमा, यस विविधताका लागि, यात्रुहरूले कोलम्बिया भ्रमण गर्न उत्तम समय छनौट गर्ने अवसर पाउँदछन् जुन उनीहरू तातो वा चिसो मन पराउँछन्। देश जाने बेलामा स्पष्ट हुन, कुनै पनि परिस्थितिका लागि तयार हुन सक्ने तापक्रमको बारेमा पत्ता लगाउनु उत्तम हुन्छ।
1 कोलम्बिया को मौसम के हो?
2 कोलम्बिया को लागी सबैभन्दा उत्तम समय के हो?
कोलम्बिया को मौसम के हो?
न्यानो मौसम: यस मौसमसँगको क्षेत्रहरूमा तातो २° डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ, प्रशान्त महासागरमा देखा पर्दा (जहाँ तपाईं हम्पब्याक व्हेल हेर्न सक्नुहुन्छ) क्यारिबियन तटमा (जहाँ टेरोना नेश्नल प्राकृतिक पार्क अवस्थित छ र जहाँ बारानक्विलाको लोकप्रिय कार्निवल) र सान हो। Andrés (डाइभिंग र अन्य पानी खेल अभ्यास गर्न को लागी शानदार समुद्र तट संग एक गन्तव्य)।
तापक्रमको मौसम: काली (प्रख्यात काली मेलाको घर) र मेडेलन (जहाँ फ्लावर मेला लाग्छ) जस्ता क्षेत्रहरूमा तापक्रम १ 17 डिग्री सेल्सियस र २ 24 डिग्री सेल्सियस बीच हुन्छ।
चिसो मौसम: यस प्रकारको मौसम भएका क्षेत्रहरूमा तापक्रम १२ डिग्री सेल्सियस र १° डिग्री सेल्सियस बीच हुन्छ। यो कोलम्बियाको राजधानी बोगोटेको कुरा हो। एउटा शहर जुन परम्परा र आधुनिकतालाई फ्यूज गर्दछ दक्षिण अमेरिकाको एथेन्सको रूपमा। बोगोटामा बनाउनको लागि आवश्यक भ्रमण भनेको गोल्ड संग्रहालय हो।यो पुरानो हिस्पैनिक सभ्यता वा एल डोराडोको प्रख्यात कथाको बारेमा जान्न आवश्यक छ।
हामी रोक्यौं: यी क्षेत्रहरूमा तापमान6डिग्री सेल्सियस र १२ डिग्री सेल्सियस बीच हुन्छ। यो चिंगाजा राष्ट्रिय प्राकृतिक पार्क हो, कोलम्बियाको एन्डियन क्षेत्रमा पूर्वी कर्डिलेरामा अवस्थित प्राकृतिक खजाना। Condors, Andean भालु र सेतो पुच्छर मृगहरु जस्ता प्रजातिहरु यहाँ बस्छन्।
हिमनद क्षेत्र:6डिग्री सेल्सियसभन्दा तलको तापक्रम यहाँ अनुभव गरिन्छ। यो सियरा नेभादा डे सान्ता मार्टाको हो, क्यारेबियन तटमा कोलम्बियाको उत्तरमा अवस्थित हुन्छ, जहाँ तपाईं पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ।
ट्रपिकल वन: तापक्रम २ 27 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढिमा, उष्णकटिबंधीय जंगलहरू आर्द्र र तातो हुन्छन्। प्रशान्त तट, माग्डालेना र क्याटाटुम्बो बेसिनहरू र अमेजन, यस ग्रहको सब भन्दा धनी र सबैभन्दा जैविक विविध ज jun्गलको मामला हो जहाँ तपाईं विपुल प्रकृति लिन सक्नुहुन्छ। वर्षा वर्षभरि प्रशस्त मात्रामा हुन्छ, मार्चको महिना हो जब उनीहरू तिनीहरूको अधिकतम मूल्यमा पुग्छन्। यद्यपि, न्यूनतम वर्षा जून र सेप्टेम्बरको बीचमा पर्दछ। त्यसकारण, वर्षाको थोरै मात्राको कारण, जुलाई र अगस्त महिनाहरू अमेजनमा यात्रा गर्नको लागि उत्तम समय हो।
Steppe उष्णकटिबंधीय: यो यसको दुर्लभ वर्षा, उच्च तापक्रम र यसको सीमित वनस्पतिले चित्रण गर्छ। दुई उदाहरणहरू बोयाका वा ला गुआजिराको क्यान्डेलेरिया मरुभूमि हो जुन यसको विशाल बालुवा टिब्बा र मरुभूमि परिदृश्यको विशेषता हो। यहाँ तपाईं एक ranchería भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ वाउउ आदिवासीहरूको संस्कृति पत्ता लगाउन।
सवाना जलवायु: ओरिनोक्विया, बोलिवार, हुइलाको उत्तरी र काका उपत्यकाको केन्द्रमा उपस्थित। यो एक सुक्खा र एक वर्षा seasonतु, चरन वनस्पति संग विशेषता छ।
आर्द्र बरसातको मौसम: कावेटीमा उपस्थित, भाप्स, एन्टिओक्विया र कोर्डोबाको अंश। कम वर्षा, उच्च तापमान भिन्नता र कम घना वन वनस्पति।
कोलम्बिया को लागी सबैभन्दा उत्तम समय के हो?
कोलम्बिया को लागी उत्तम समय तपाईको छुट्टीमा भेट्न चाहानु भएको क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ। देशसँग महान स्थलाकृतिक विविधता छ जुन परिमार्जन, जैवविविधता र मौसमको एक विशाल विविधतामा अनुवाद गर्दछ।
उदाहरणका लागि, एन्डियन क्षेत्रहरूमा यस ठाउँबारे जान्ने उत्तम समय जुलाई र अगस्ट महिना हो किनभने यस अवधिमा त्यहाँ तातो तापक्रम र केही वर्षा हुन्छ।, जुन यात्रा को लागी आदर्श हो। यस समयमा तपाईंले आफ्नो सुटकेसमा न्यानो लुगाहरू समावेश गर्नुपर्नेछ (किनभने यो सूर्यास्तमा चिसो हुन्छ र रात चिसो हुन सक्छ)। सनस्क्रीन ल्याउने सल्लाह पनि दिइन्छ, किनकि क्षेत्रको उचाईले तपाईंलाई सजिलै बर्न बनाउन सक्दछ यदि तापमान एकदम उच्च छैन भने पनि।
अमेजनका वरपर रहेका लेटिसियामा अवस्थित सहरहरूमा जानका लागि उत्तम समय भनेको जुलाई र अगस्ट महिनाहरू हुन् किनकि त्यहाँ पानी पर्ने भए पनि प्रशान्तको उत्तरी तटमा वर्षभर तातो हुन्छ। यी महिनाहरूमा दक्षिण प्रशान्त तटमा जानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पनि छ। साथै जुन र सेप्टेम्बर यस क्षेत्रको भ्रमण गर्न उचित छन्। क्यारेबियन तटमा भ्रमण गर्न डिसेम्बर र अप्रिल बीचमा उत्तम समय हो।
यदि तपाईं फूलको आनन्द लिन कोलम्बिया यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसो भए वर्षा youतुको सुरूमा तपाईंले यात्रा गर्नुपर्नेछ। किनभने अन्तमा देशका केही क्षेत्रमा बाढी आउन सक्छ। अपवादहरू बोगोटा र क्यारिबियन तटको वरपरको क्षेत्र हुन्।
साथै, कोलम्बियाको यात्राको योजनाको बखत तपाईंले यो याद राख्नु पर्छ कि तपाईं जानु भएको भूमिको क्षेत्र जति छोटो छ, ती भूमिहरू त्यति चिसो हुनेछन्। उदाहरणको लागि, पहाडका चुचुरो snow,०० मिटरको उचाईमा हिउँमा कभर गरिन्छ। कोलम्बिया को मौसम को बारे मा यो सबै जानकारी को साथ, तपाईं यो सुन्दर दक्षिण अमेरिकी देश मा आफ्नो साहसिक शुरू गर्न को लागी तयार हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » कोलम्बिया को मौसम
भारतमा सब भन्दा महत्वपूर्ण दरबारहरू
हंस ब्रिंकरको कथा